Windows komputa yakanamatira paKuchenesa skrini
kana wako Windows 11 kana Windows 10 komputa yakabatikana Kuchenesa 0% kana 100% yakakwana, Usadzima komputa yako skrini; mushure mekuisa Feature Update, hezvino zvaunofanira kuita kugadzirisa nyaya.
Microsoft inowanzo buritsa Feature Update ine zvakawanda zvekuvandudza, maficha, shanduko, nezvimwe. Kunyangwe zviri nyore kuisa Feature Update pa. Windows 11/10 PC, unogona kunge uine matambudziko dzimwe nguva. Panogona kuve nenguva apo inogona kunge yakanamatira paKuchenesa kumusoro skrini ine chikamu che100%, 95%, 0%, nezvimwe.
Tinokurudzira kuti umirire - kunyangwe zvikatora awa kana maviri! Asi zvakadaro, kana PC yako yakanamatira, saka kugadzirisa iyo Windows Kugadziridza kwakanamatira paKuchenesa screen nyaya, tevera matanho aya:
Shandisa Automatic Startup Repair
Shandisa System Restore Point kudzoreredza komputa yako
Isa iyo Update muSafe Mode
Iwe unofanirwa kuwana Safe Mode kana Yepamberi Kutanga Sarudzo sezvo PC yako yakamira! Safe Mode or Zvokutanga Kutanga Zvimwe rega iwe ugadzirise yako Windows PC. Yepamberi Yekutanga Sarudzo inokupa iwe Kudzoreredza System, System Image Kudzoreredza, Kutanga Settings, Kutanga Kugadzirisa, uye akati wandei akadai ekudzoreredza kana kugadzirisa sarudzo. Safe Mode inokupa iwe kuwana kune ese maturusi ehurongwa seCMD, System Restore, nezvimwe, izvo zvinogona kukubatsira. Saka kana yako komputa haibatike zvakajairika, ndizvo yakanamatira mukusingaperi reboot loop kana ndizvo yakanamatira pane imwe skrini, ipapo pfungwa yako inofanira kunge iri yekupinda muSafe Mode kana bhutsu kuenda kuAdvanced Startup Options skrini
1] Shandisa Otomatiki Kutanga Kugadzirisa
Kana iyo yekumisikidza yakanamatira pane imwe muzana kwenguva yakareba, unogona kutanga kugadzirisa nekushandisa iyo Otomatiki Kutanga Kugadzirisa. Icho chinhu chakavakirwa-mukati-chakasanganisirwa mukati Windows 11 uye Windows 10.
Kunyangwe iwe uchigona kupinda kune yako mushandisi account kana kwete, unofanirwa vhura Advanced Startup sarudzo pakombuta yako. Kana iwe ukakwanisa kutangazve komputa yako usina kuisa iyo yekuvandudza, maitiro ari nyore kwauri. Izvozvo zvakati, unogona kudzvanya Kuhwina + ini kuti uzarure iyo Windows Settings, enda ku System > Kudzoreredza uye chengeta pa Tangazve zvino bhatani.
Nekudaro, kana iwe usingakwanise kupinda muaccount yako, unofanirwa kutevedzera imwe nzira. Nemashoko akareruka, iwe unofanirwa kutangazve komputa yako 2-4 nguva uchienderera kusarudza iyo Yepamberi Kutanga sarudzo.
Kutevera izvozvo, unogona kuenda Troubleshoot > Kutanga Kugadzirisa.
Zvadaro, iwe unofanirwa kuchengetedza nguva shoma kusvika komputa yako yagadzirisa zvinhu kwauri. Kana wapedza, unokwanisa kusaina kusystem yako zvakajairika.
3] Shandisa System Restore Point
Sezvo iwe usingakwanise kubhuya pakombuta yako, unofanirwa kushandisa iyo System Restore point. Unofanira kuvhura Advanced Startup sarudzo. Kana yangovhurwa, enda ku Dambudziko> Sisitimu Dzosera.
Ipapo, iwe unogona kuwana iyo System Kudzoreredza mapoinzi, uye zvinokwanisika kusarudza yakakodzera System Kudzoreredza poindi sekuenderana nezvaunoda.
Verenga: Maitiro ekuita System Restore riini Windows haisati yatanga kune desktop
3] Isa iyo Yekuvandudza muSafe Mode
Kazhinji, Safe mode inokubatsira kugadzirisa zvinhu kana paine nyaya yemutyairi kana chimwe chinhu chakadaro. Zvisinei, mashoko akanaka ndeokuti unogona isa zvigadziriso mu Safe mode. Pane rimwe divi, kutanga mu Safe mode zviri nyore nyore paunenge uchishandisa Windows 11 kana Windows 10. Nekudaro, kana iwe usingakwanise kupinda pakombuta yako, unofanirwa kuenda kuburikidza nePamusoro Kutanga sarudzo. Nokuda kweizvi, enda Troubleshoot> Advanced Options> Kutanga Settings. Wobva watangazve komputa yako uye wodzvanya iyo Nhamba 4 kiyi pane yako keyboard.
Ichatanga kupinda Safe mode mukati menguva pfupi. Zvadaro, unogona kudhawunirodha uye kuisa zvigadziriso paPC yako. Kunyangwe iri Feature update kana chero chimwe chinhu, unogona kuimisa pasina dambudziko.
Nei yangu Windows Kugadziridza kwakamira pakuchenesa?
Panogona kuva nezvikonzero zvakawanda nei Windows Kugadziridza kwakanamatira paKuchenesa skrini. Semuenzaniso, kukanganisa, kudhawunirodha huwori, nezvimwewo, zvinogona kunge zviri zvikonzero. Nekudaro, iwe unogona kugadzirisa nyaya nekutevera gwara rambotaurwa.
Verenga: Disk Kucheneswa kwakanamira pa Windows Update Cleanup.
Inguva yakareba sei Windows Kuvandudza kuchenesa kutora?
Zvichienderana nehukuru hwekuvandudza, haifanirwe kutora anopfuura maminetsi gumi nemashanu kupedzisa mune yakaipisisa kesi. Zvisinei, zvinoenderana nekombiyuta hardware, internet connection, rudzi rwekuvandudza, nezvimwe. Kana iri nguva dzose Windows Kwidziridzo, inofanirwa kuitwa mukati me5-10 maminetsi kana kurodha kwapera.
Fix Windows 10 yakanamatira Kugadzirira Security Sarudzo
Maitiro ekushandisa System Restore mukati Windows 10, 11, 7, uye 8
Heano maitiro ekudzoreredza Windows 10 kune imwe nguva yekutanga munguva
Komputa yakanamatira paBIOS Splash Screen
Ungatanga Sei Windows 10 in Safe Mode